Doorasho, xulasho, magacaabid, maxaa ka socda Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Doorashooyinka guud ee Soomaaliya oo ku dhawaad mudo sanad ah dib u dhacay ayaa Jul 29, 2021, laga daahfuray magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Jubbaland, waxaana tan iyo iba-furkii doorashada taagnaa cabashooyin la xariira wax is dabamarin iyo ku tagri-fal awoodeed.
Madaxda Maamullada oo garab ka helaya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-garsiinta, ayaa dhaqan galiyay boobkii ugu ba’naa ee kuraasta Aqalka sare, waxa ay shaqsiyaad gar ah u xireen baratanka, halka ay soo saareen xildhibaanno xigto, xidid iyo xabiib la ah Farmaajo.
Hayeeshee, doorashada kuraasta Golaha shacabka, ayaa ku bilawtay, saxmad iyo sawaxan siyaasadeed, waxaeyna durbaba la kulmeysa dhaliilo kala duwan oo la xiriira sida aan quruxda badneynee loo daahfuray.
Dadka Falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in waxa dalka ka socda aan loogu yeeri karin doorasho, iyadoo taa baddelkeedana u muuqata magacaabid, taasoo ka fog xitaa xulashada.
Haddaba maxey kala Yihiin 3-daan qoddob?, keese si dhab ah u qaadan kara waxa ka socda iminka dalka?.
1- Doorasho waxaa loo yaqaanaa nidaam ay dadku u siman yihiin, kaasoo iyadoo qof waliba uu xor yahay uu codkiisa siinayo kii uu doono, waana sida ku xusan dastuurka Soomaaliya nuqul kiisa koowaad.
2- Xulashada ayaa iyaduna ah, in laba qof ama 3 qof oo kooban ay dadku kala xushaan, iyadoo qof waliba uu fiirinayo kan uu taabacsan yahay ama isaga la mudan.
3- Magacaabidda oo labadaasi ka duwan, ayaa ah in la ogyahay qofka soo baxayo, maadaama aanay jirin labo ama 3 qof oo shaqsigaasi la baratameysa, taasoo ka dhigeysa inuu yahay mid magacaaban oo ku dhawaaqitiisa la sugayo.
Qoddobka u danbeeya ee magaabidda ayaa ah tan la siin karo waxa dalka iminka ka socda, ee loogu yeerayo doorasho, waana dhacdada walwalka ku beereysa waxgaradka iyo aqoonyahannada dareensan dhabihii qaribnaa ee uu dalku soo maray.
Aqoonyahannada ayaa badankooda sheegaya, in waxa iminka socda ay tahay wajigii labaad ee wixii ka dhacay Magaalooyinka Baydhaba, Dhuusamareeb Iyo Jowhar, taasoo dadka iminka ka arrimiya ay ahaayeen kuwa magacaaban oo loo xooggay doorashada, kuna soo baxay wareegii koowaad.
Maah-maahda Soomaaliyeed ee ah "Hal Booli ah Nirig Xalaala Ma Dhasho" ayaa meesha taalla, waxana xaaladda Soomaaliya ee cakiran lagu macneeyaa ama loogu abtiriyaa mid ka dhalatay, doorasho laga been sheegay iyo xukun la isku dhajiyey, taasoo miraha laga dhaxli karo ay bulshadu faham buuxa ka heysato.